Lasoco qoraaga WordPress oo wata Google Analytics
Raadinta Qoraayaal badan oo WordPress ah oo leh Google Analytics
Isniin, February 8, 2010 Axad, Abriil 24, 2016 Douglas Karr
Waxaan qoray qoraal kale oo ku saabsan sida loola socdo qorayaal badan oo ku jira WordPress oo leh Google Analytics mar ka hor, laakiin wuu khaldamay! Banaanka WordPress Loop-ka, ma awoodid inaad qabsato magacyada qoraaga si koodhku u shaqeyn waayo.
Waan ka xumahay guuldarada.
Waxaan sameeyay qodis dheeri ah waxaanan ogaaday sida loo sameeyo si xariifnimo leh astaamo badan oo Google Analytics ah. (Run ahaantii si daacad ah - waa marka aad jeclaato xirfad-yaqaan Analytics baakadaha sida Webtrends!)
Tilaabada 1: Ku dar Faahfaahin Domain-ka jira
Tallaabada ugu horreysa waa inaad ku darto xog dheeraad ah boggaaga hadda jira. Tani waa ikhtiyaar dadka badankood aysan aqoon u lahayn laakiin waxay si fiican ugu shaqeeyaan nooca noocan ah.
Tallaabada 2: Ku dar Filter Ku Darso Nooca Qoraaga Cusub
Waxaad ubaahantahay inaad cabirto oo kaliya aragtida bogga ay dabagal kuhayaan qorayaasha kujira muuqaalkan, markaa kudar shaandhada qeybta hoose /qoraa/. Hal qoraal oo tan ah - waa inaan u sameeyaa "kuwa ku jira" hawl wade ahaan. Tilmaamaha Google waxay ku baaqayaan ^ ka hor galka. Xaqiiqdii, kama qori kartid ^ berrinka!
Talaabada 3: Ku dar Filter Ka-reebis ah Faahfaahintaada Aasaasiga ah
Uma baahnid inaad dhab ahaantii raad raac ku sameysid dhammaan bogagga dheeriga ah ee qoraaga ee ku jira Boggaaga asalka ah, markaa ku dar shaandhayn asalkaaga asalka ah si looga saaro qaybta hoose / qoraaga /.
Tallaabada 4: Ku dar Loop aaladda Cagta
Raadintaada Google Analytics ee jira iyo hoosta khadkaaga trackPageView hadda, ku dar wareegga soo socda feylkaaga mawduuca lugtiisa:
var authorTracker = _gat._getTracker ("UA-xxxxxxxx-x"); authorTracker._trackPageview ("/ by-qoraaga / ");
Tani waxay ku qabsan doontaa dhammaan raadraacaaga, qoraaga, muuqaal labaad oo ah boggaaga. Adoo ka reebaya raadraackan boggaaga aasaasiga ah, kuma dari doontid aragtiyo dheeri ah oo aan loo baahnayn. Maskaxda ku hay in haddii aad leedahay bog guri oo leh 6 dhejisyo, waxaad kula socon doontaa 6 bog oo ku saabsan lambarkan - mid ka mid ah qoraal kasta, oo uu daba socdo qoraaga.
Waa tan sida Qoraaga Raadinta uu ugu eegi doono astaantaas gaarka ah:
Haddii aad tan ku dhammaysay si ka duwan, waxaan u furnahay siyaabo dheeri ah oo aan kula socon karo macluumaadka qoraaga! Maaddaama dakhligayga Adsense uu la xiriiro astaanta, waxaan xitaa arki karaa qorayaasha soo saaraya dakhliga ugu badan ee xayeysiinta :).
Tags: qoraagaraadraaca qoraagaAnalytics google
Muhiimadda Naxwaha Wanaagsan iyo Xarakaynta Blogging
Dukaanleyda ma ku dhufan karaan dahab Facebook-ga?
Feb 8, 2010 markay ahayd 3:16 PM
Boostada weyn Doug! Beddelka loogu talagalay raadinta Qorayaasha heerkan ayaa leh la socoshada dhacdada ee GA. Waxaad kuheli kartaa tiro inta jeer ee mid kasta oo ka mid ah qorayaashaada qoraaladooda la daawaday, isla isla muuqaalkaaga xogtaada caadiga ah, adigoon wax ka badalin aragtida bogga. Sidoo kale, waad u adeegsan kartaa cabirro badan warbixinta Dhacdada si aad u aragto ilaha ay u wadeen martida qorayaasha kala duwan (tusaale yaa soo jiidanaaya aqristayaasha ugu badan ee Twitter), halka ay ka imaanayaan, iwm. Waxaan isku dayay inaan qoro qoraalka, laakiin waxaan ayaa ka dhammaaday xadka astaamaha. Waa tan xiriiriye: http://www.wheresitworking.com/2010/02/08/tracking-authors-in-wordpress-with-google-analytics-event-tracking/
Febraayo 10, 2010 saacadu markay tahay 8: 50 AM
Doug, waxaad marwalba u muuqataa inaad dhigto boostada saxda ah waqtiga saxda ah, waxaan ku hirgelin doonaa tan boggeena Indiana Insider (http://www.VisitIndiana.com/blog/) maanta!
My Site (guji si aad wax uga beddesho)
Wacan, waad ku mahadsantahay wadaagista Doug-kan! Waxaan arkaayaa in_markaha () loo baahan yahay in lagu badalo get_the_author () si looga hortago in magaca qoraha laba-laabmo oo la soo saaro laba jeer.
Sidoo kale, sidee xalkaagu u barbar dhigaa kan Aadam?
Jan 27, 2011 saacadu markay ahayd 7:32 PM
Doug, waxaan isku dayay inaan hirgaliyo tan, laakiin waxay kaliya la socotaa aragtida bogagga qoraaga dhabta ah (… / qoraaga / AUTHORNAME), ee ma ahan aragtiyada qoraal kasta oo la arko, oo ay kala soocaan qoraaga - wax fikir ah?
Jan 27, 2011 saacadu markay ahayd 7:42 PM
Qaabkii aan ku hirgaliyay waxay dhab ahaan ka adeegsaneysay laba koonto oo kala duwan gudaha Google Analytics (lambarro gaar ah oo UA ah). Waxaan ugu yeeraa hal akoon “Qoraa” kan kalena waxaan ku hayaa guud ahaan goobta. Caqli gal
Jan 27, 2011 saacadu markay ahayd 7:46 PM
Oh, laba nambarro UA gebi ahaanba kala duwan? Kaliya waxaan aasaasay astaan ​​cusub oo hoos timaada barta UA. Mid ka mid ah tallaal ayaan siin doonaa waana ku soo ogeysiin doonaa haddii ay aniga ila shaqeyneyso.
Jun 25, 2012 at 2: 15 PM
Aad baad u mahadsantahay. Waxaan tan isku dayayaa hadda. Hal shay inkasta, waxaan ka saaray "echo" wareegga maxaa yeelay waxay umuuqatay in ay soo koobiyeen magaca qoraaga. Tusaale ahaan / qoraa / Magaca Qoraha Magaca Qoraha Magaca ayaa la muuqday echo.
Oktoobar 12, 2014 at 4:23 PM
Waad ku mahadsantahay casharka. Waxaan u baahanahay inaan la socdo aragtida bogga ee qoraa kasta oo ku jira barta wararka lagu ururiyo si aan ugu bixiyo aragtiyaha.
Oo ay ku jiraan homepage runti ma shaqeeyo, in kastoo.
Miyaad ka fogaan kartaa koodhka bogga? Haddii koodhkaas la geliyay kaliya qaabeynta hal bog ah (ikhtiyaar ku yaal bogagga caadada ah), taasi ma shaqeyn lahayd? marka laga reebo aragtida bogga ee tirinta?
Oktoobar 12, 2014 at 4:49 PM
Runtii waan adeegsanaynay Macnaha guud.ly taasna si fiican ayeyna u shaqeyneysaa.
May 16, 2015 at 8: 54 PM
Sideed u sameysaa tallaabada 1aad fadlan: “kudar faahfaahin dheeraad ah bartaada hadda”
Waxaad muujineysaa sida loo buuxiyo tallaabada, laakiin ma ahan sida loo helo meesha ugu horeysa.
May 17, 2015 at 9: 28 PM
Waxay hubaan inaysan ka dhigin wax fudud, iyaga Justin? Waa kuwan muuqaalka guud ee Google Analytics .